Iinkonzo kunye neengozi zePhulo lokuThumela i-imeyile ngokuBini | Martech Zone
Abathengi abanawo umonde wokuhlela iibhokisi zeebhokisi ezinezinto ezixineneyo. Bafakwa yimiyalezo yokuthengisa mihla le, uninzi lwabo abangazange babhalisele yona kwasekuqaleni.
Ngokwe-International Telecommunication Union, iipesenti ezingama-80 zezithuthi ze-imeyile kwihlabathi liphela ingahlelwa njengogaxekile. Ukongeza, i-avareji yezinga lokuvula i-imeyile phakathi kwawo onke amashishini iwela phakathi kwe-19 ukuya kuma-25 ekhulwini, Oko kuthetha ukuba ipesenti enkulu yababhalisi abayikhathazi nokucofa imigca yesifundo.
Inyani yile, nangona kunjalo, ukuba ukuthengisa nge-imeyile yenye yezona ndlela zisebenzayo zokujolisa kubathengi. Ukuthengisa nge-imeyile yeyona ndlela ilungileyo yokwandisa i-ROI, kwaye ivumela abathengisi ukuba bafikelele kubathengi ngendlela ethe ngqo.
Abathengisi bafuna ukuguqula izikhokelo zabo nge-imeyile, kodwa abafuni ukubeka emngciphekweni ukubacaphukisa ngemiyalezo yabo okanye ukubalahla njengababhalisi. Enye yeendlela zokuthintela oku kukufuna ifayile ye ukungena kabini. Oku kuthetha ukuba emva kokuba ababhalisile bebhalisa ii-imeyile kunye nawe, kuya kufuneka baqinisekise ubulungu babo nge-imeyile, njengoko kubonisiwe ngezantsi:
Makhe sijonge ubuhle kunye neengozi zokungena kabini, ukuze ukwazi ukuthatha isigqibo sokuba zilungele wena kunye neemfuno zeshishini lakho.
Uya kuba nababhalisi abambalwa, kodwa umgangatho ophezulu
Ukuba usaqala nge-imeyile, unokufuna ukugxila kwiinjongo zexesha elifutshane kwaye ukhule uluhlu lwakho. Ukhetho olulodwa kunokuba lolona khetho lubalaseleyo kuba abathengisi banamava Ama-20 ukuya kuma-30 epesenti yokukhula ngokukhawuleza kuluhlu lwabo ukuba bafuna kuphela ukungena okukodwa.
Icala elisezantsi lolu luhlu lukhulu, olunye lokungena kungenxa yokuba aba ababhalisi bekhwalithi. Abayi kuba nakho ukuvula i-imeyile yakho okanye ucofe ukuthenga iimveliso zakho. Ukungena kabini kukuqinisekisa ukuba ababhalisile bakho banomdla wokwenyani kwishishini lakho kunye nento onokuthi uyinike yona.
Uya kuphelisa ababhalisile abanganyanisekanga okanye abanesiphene
Umntu othile utyelela iwebhusayithi yakho kwaye unomdla wokubhalisela uluhlu lwakho lwe-imeyile. Nangona kunjalo, akangoyena mchwethezi ubalaseleyo okanye akanikeli ngqalelo, kwaye iphela ngokufaka i-imeyile engachanekanga. Ukuba uhlawulela ababhalisile bakho, ungaphulukana nemali eninzi ngee-imeyile zabo ezimbi.
Ukuba ufuna ukunqanda ukuthumela kwiidilesi ze-imeyile ezingachanekanga okanye eziphosakeleyo, ungenza ukungena kabini, okanye ubandakanye ibhokisi yokuqinisekisa ye-imeyile xa usayina, njenge-Old Navy, eyenziwe apha:
Ngelixa iibhokisi zokuqinisekisa nge-imeyile ziluncedo, azisebenzi njengokungena kabini xa kufikwa ekukhuliseni ii-imeyile ezimbi. Nangona kunqabile, omnye umntu angabhalisela umhlobo kuluhlu lwe-imeyile, nokuba umhlobo akakhange acele ukungena. Ukungena kabini kuya kuvumela umhlobo ukuba angabhalisi kwii-imeyile ezingafunekiyo.
Uya kudinga iteknoloji engcono
Ukungena kabini kunokubiza ngaphezulu, okanye kufuna itekhnoloji engaphezulu, kuxhomekeke kwindlela okhetha ngayo ukuphatha ukuthengisa nge-imeyile. Ukuba wakha iqonga ngokwakho, kuya kufuneka utyale ixesha elongezelelekileyo kunye nezixhobo kwiqela lakho le-IT ukuze bakwazi ukwakha eyona nkqubo ibalaseleyo. Ukuba unomboneleli we-imeyile, banokukuhlawulisa ngokujonga ukuba bangaphi ababhalisile onabo okanye ii-imeyile ozithumelayo.
Zininzi iiplatifomu ze-imeyile phaya ezinokukunceda uphumeze amaphulo akho. Uya kufuna ukukhetha enye ehambelana neenjongo zakho, unamava nezinye iinkampani ezikumzi mveliso wakho, kwaye unokutshatisa uhlahlo-lwabiwo mali lwakho.
Khumbula: Ukuba uyishishini elincinci, awuyidingi eyona nto ibiza kakhulu, eyona ibiza kakhulu yokuthengisa nge-imeyile. Uzama nje ukuphuma emhlabeni, kwaye neqonga lasimahla liya kwenza okwangoku. Nangona kunjalo, ukuba uyinkampani enkulu, kwaye ujonge ukwakha ubudlelwane obunentsingiselo kunye nabathengi, kuya kufuneka ubenomboneleli obalaseleyo onokubakho.
Ngaba usebenzisa ukungena kabini okanye okukodwa? Yeyiphi inketho esebenza ngokukuko kwishishini lakho? Sazise kwicandelo lamagqabaza
tags: ukungena kabinikabini ukungena kwi-imeyileukungena kwe-imeyileUkungena kwiphepha leendabaukhethe ku